Mesut Ozil oo heshiis la gaaray kooxdiisa xigta… (Goormee ayuu la midoobi doonaa naadigiisa cusub?) – Gool FM
Mesut Ozil oo heshiis la gaaray kooxdiisa xigta… (Goormee ayuu la midoobi doonaa naadigiisa cusub?)
(London) 06 Jan 2021. Mesut Ozil waqtigiisii Arsenal ayaa u muuqda mid guud ahaan idlaaday kaddib markii la soo wariyay inuu laacibkan heshiis la gaaray mid ka mid ah naadiyadii sida aadka ah loola xiriirinayay.
Wararka ka imaanayan dalka Turkiga ayaa sheegaya in 32-jirkan uu heshiis la gaaray kooxda Fenerbahce.
Labadan dhinac ayaa gaaray heshiis saddex sano iyo bar ah, waxaana Ozil uu ku biiri doonaa kooxda reer Turkey bishan gudaheeda, taasoo ka dhigan inuu soo af jaray qandaraaskii uu Arsenal kaga qaadanayay mushaharka dhan 320 kun oo gini toddobaadkii.
Kubbad qaabeeyahan ayaa Gunners sanadkii 2013 kaga soo biiray dhanka kooxda Real Madrid, balse waxa uu noqday mid aanan ku jirin qorshaha Macallin Mikel Arteta tan iyo billawgii xukunkiisii.
12-kii bilood ee la soo dhaafay, waxaa albaabada Emirates Stadium ay u furnaayeen inuu ka baxo Mesut Ozil, kaasoo ugu dambeyn lagu soo warramayo inuu heshiis la gaaray koox ka dhisan dalka uu asal ahaan ka soo jeedo.
Ozil ayaa xiriir xooggan la leh Turkiga, waxaana lagu xasuustaa xiriirka wanaagsan ee uu la leeyahay madaxweynaha dalkaas ee Recep Tayyip Erdogan.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa la sugayaa in si rasmi ah loogu dhawaaqo ku biirista riyada ah ee Ozil ugu biirayo naadiga 19-ka jeer heysata horyaalka Turkish League ee Fenerbahce.
"Messi waa uu ka tagayaa Barcelona xagaagan"
Georginio Wijnaldum oo iska diiday heshiis cusub oo ay usoo bandhigtay Liverpool... (Kooxdee ayuu doonayaa inuu ku biiro?)